मेइजी पुनर्स्थापना - विकिपिडिया
मेइजी पुनर्स्थापनाको अन्त्यमा, सोगुनले औपचारिक रूपमा आफ्नो शासन सम्राट मेइजीलाई हस्तान्तरण गरेका थिए।
इतो हिरोबुमी मेइजी पुनर्स्थापना युद्धका प्रमुख नेता थिए।
मेइजी पुनर्स्थापना (जापानी: 明治維新, मेइजी इसिङ) १९औँ शताब्दीमा जापानमा भएको एक घटनाक्रम थियो। यसबाट सन् १८६८ मा सम्राटको शासनको पुनर्स्थापना भएको थियो। यसबाट जापानको राजनीतिक र सामाजिक परिवेशमा धेरै महत्त्वपूर्ण परिवर्तन भएसँगै जापान द्रुत आर्थिक, औद्योगिक र सैन्य विकासतर्फ अघि बढेेेेको थियो।  यो क्रान्तिले जापानको एदो युगको अन्त्य गरी मेइजी युगको प्रारम्भ गरेको थियो। यस पुनर्स्थापना अगाडि, जापानका सम्राट नाममा मात्र शासक थिए र वास्तवमा सोगुन (将軍) उपाधिका एक सैनिक तानाशाहको राज थियो।
१.१ अमेरिकी दबाब
१.२ सन् १८५३ पछि
२.१ विश्व मञ्चमा जापानको नयाँ स्थान
अमेरिकी दबाब[सम्पादन गर्ने]
अमेरिकी सरकारले उन्नाइसौँ शताब्दीको मध्यमा जापानसँग व्यापार गर्ने निर्णय गरेको थियो। सन् १८४३ मा एक जहाज र युद्धको जहाज लिएर अमेरिकी नौसेनाका कप्तान जेम्स बिडल टोकियो बन्दरगाहमा पुगेर जापानसँग व्यापारिक सम्झौताको लागि अनुरोध गरेका थिए। उनलाई अपमानपूर्वक फिर्ता पठाइएको थियो। सन् १८४९ मा कप्तान जेम्स ग्लिन नागासाकी गएर वार्ता गरी अमेरिका फर्के र अमेरिकी सरकारलाई जापानलाई बलपूर्वक व्यापारको लागि सहमत गराउने सल्लाह दिएका थिए। सन् १८५३ मा कप्तान म्याथ्यु पेरीले टोकियो बन्दरगाहमा लंगर लगाए। त्यसबेला तोकुगावा परिवारको वंशले सोगुन (तत्कालीन समयमा जापानको अधिनायक) आसनमा विराजमान थिए। जब सोगुनले पेरीको जहाजलाई फिर्ता जान आदेश दिए तब पेरीले सोगुनलाई तोपको धम्की दिएका थिए। त्यसपछि जापान व्यापार गर्न बाध्य भएको थियो।
सन् १८५३ पछि[सम्पादन गर्ने]
यस घटनाबाट जापानमा गहिरो प्रभाव परेको थियो। जापानी समाज र विभिन्न क्षेत्रका शक्तिशाली व्यक्तिहरूले "जापानलाई पश्चिमी खतराबाट जोगाउन जापानलाई बलियो बनाउनुपर्छ र पश्चिमी विज्ञानलाई जापानी समाजको हिस्सा बनाउनुपर्छ" भन्ने विचार महसुस गरेका थिए। सोगुन प्रणालीको विरुद्धमा एउटा लहर उठ्यो र सन् १८६७ नोभेम्बर ९ मा तत्कालीन सोगुन, तोकुगावा योसिनोबुले औपचारिक रूपमा आफ्नो शासन अधिकार सम्राट मेइजी (明治天皇) लाई हस्तान्तरण गरेका थिए। १० दिन पछि उनले राजीनामा दिएपछि सोगुन प्रणाली समाप्त भएको थियो। यसपछि पनि वास्तविक शक्ति सम्राटको हातमा गएको थिएन, तर शक्तिशाली गुटको हातमा गएको थियो जसको लक्ष्य जापानलाई द्रुत रूपमा आधुनिकीकरण गर्ने थियो। यसबाट जापानमा औद्योगिक र सैन्य क्रान्तिको लागि मञ्च तयार भएको थियो।
मेइजी पुनर्स्थापनाबाट जापानमा औद्योगिकीकरणको गति निकै तीव्र भएको थियो। ‘देशलाई धनी बनाऔँ, सेना बलियो बनाऔँ’ (富国強兵, फुकोकु क्योहेई) भन्ने नारा अन्तर्गत विकासका काम अघि सरेका थिए। धेरै जापानी विद्यार्थीहरूलाई पश्चिमी विश्वविद्यालयमा पठाइएपछि विज्ञान तथा प्राविधिक ज्ञान देशमा भित्रिएको थियो। जापानी समाज चार वर्णमा विभाजित थियो, तर शासकहरूले जातिवाद उन्मूलनमा ठूलो जोड दिएका थिए। क्रमसः सामन्त (क्षेत्रीय तानाशाह)को जमिन जफत गरेर राष्ट्रलाई राजनीतिक रुपमा सङ्गठित गरिएको थियो।
पुरानो व्यवस्थामा समुराई योद्धाहरूलाई सरकारले तलब दिने गर्दथ्यो जुन सरकारी कोषमा ठूलो भार थियो। यसलाई बन्द गरियो। यस घटनापछि थुप्रै समुराईहरूले सरकारी जागीर गर्न थाले भने केहीले विद्रोह गर्दा दङ्गा सुरु भएको थियो जसलाई नवगठित शाही जापानी सेनाले दमन गरेको थियो।
विश्व मञ्चमा जापानको नयाँ स्थान[सम्पादन गर्ने]
जापानको व्यापार वाणिाज्यमा उन्नति भएसँगै सेना पनि शक्तिशाली बनेको थियो । सन् १८९४–१८९५ को चीन-जापान युद्धमा जापानले विजय प्राप्त गरेपछि कोरियालाई जापानको नियन्त्रित क्षेत्र बनाइएको थियो। सन् १९०४–१९०५ को रुस-जापानी युद्धमा पनि जापानले विजय हात पारेको थियो। कुनै एसियाली राष्ट्रले युरोपेली राष्ट्रलाई युद्धमा पराजित गरेको यो पहिलोपटक थियो। यसपछि जापान विश्व स्तरमा महाशक्तिको रुपमा चिनिन थालेेेेको थियो। सन् १९०० सम्ममा संसारको दश ठूला औद्योगिक शक्तिहरूमा जापानको पनि गणना हुन थालेेेेको थियो।
↑ William G. Beasley, "The Meiji restorationHistory e-book project", Stanford University Press, 1972, आइएसबिएन 9780804708159, "... The Meiji Restoration is at the heart of this contrast, since it was the process by which Japan acquiredaleadership committed to reform and able to enforce it ..."
↑ Marvin Perry, "Western Civilization: A Brief History", Cengage Learning, 2010, आइएसबिएन 9780495901150, "... Commodore Matthew Perry had opened Japan, against its will, to the West the preceding year. With the Meiji Restoration of 1867,astrong central government pushed Japan until it became one of the top ten industrial nations by 1900 ..."
"https://ne.wikipedia.org/w/index.php?title=मेइजी_पुनर्स्थापना&oldid=1060891" बाट अनुप्रेषित
यो पृष्ठलाई अन्तिमपटक २०:२९, ९ मार्च २०२२ मा परिवर्तन गरिएको थियो।